ပရဟိတ: November 2009
Further testing of ibus-waitzar
Well! in my last post, I said testing of ibus-waitzar working fine except that candidate window rendering seems not correct. Maybe because of ibus itself is not using pango for rendering in candidate window. In first testing, I installed only mymr-pangomod and ttf-masterpiece (Masterpiece Uni Sans). Now I'll install graphite, pango-graphite and ttf-sil-padauk (Padauk) for further testing.
Then make sure pango is not using graphite pango module by deleting /usr/lib/pango/1.6.0/module-files.d/pango-graphite.modules.
The word chosen for testing is thingyam (သင်္ကြန်) as rendering involves re-ordering. In mymr-pangomod implementation, re-ordering is totally taking care by pango module and Masterpiece Uni Sans opentype font doesn't have any rule for re-ordering (there's no opentype feature for re-ordering, pls correct me :-) So if rendering is not using pango, it won't be shown correctly.
Firstly, preferrred alias for sans-serif family is set to Masterpiece Uni Sans family.
Typing thingyam (သင်္ကြန်) in gedit with ibus-waitzar results the following-
Rendering in gedit is correct and rendering in candidate window is wrong; no re-ordering takes place.
Secondly, preferrred alias for sans-serif family is set to Padauk family.
Below is the result-
Rendering in gedit is wrong as expected since pango is not using graphite module and surprisingly rendering in candidate list is correct !!! But it's confirmed that candidate window is not using pango for rendering.
Posted by တင်မျိုးထက် at 3:04 AM 1 comment:
mymr-pangomod-0.7.0, ubuntu 9.10 and ibus-waitzar
Seth က ibus-waitzar စမ်းဖို့ လင့်ခ်လေးပေးလာပါတယ်။ ibus စမ်းချင်တာနဲ့ ubuntu 9.10 တင်ထားတာ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ အဲတော့မှ သတိထားမိတာ mymr-pangomod က တချို့စာလုံးတွေ (အထူးသဖြင့် အောက်မြစ်နေရာရွှေ့တာ) မှားနေတာပါ။
ပထမတော့ ubuntu 9.04 package က 9.10 နဲ့ အဆင်မပြေလို့ထင်တာနဲ့ compile ပြန်လုပ်ကြည့်တော့လဲ မထူးဘူး။ ထုံးစံအတိုင်းဟိုရှာသည်ရှာပေါ့၊ နောက်ဆုံး မိတ်ဆွေကြီး Keith ရဲ့ bug report လေးနဲ့ အိုကေသွားပါတယ်။ pango 1.26 ရဲ့ opentype mark rule နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ bug ပါ။ (နောက်မှ မြန်မာယူနီကုဒ် font အတွက် opentype rule တွေ အကြောင်းရေးပါဦးမယ်၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောရရင်တော့ myanmar opentype spec ပေါ့) pango ပြန် compile လုပ်ရတော့ နဲနဲ အလုပ်ရှုပ်သွားတာပေါ့။ mymr-pangomod ကို ubuntu 9.10 နဲ့စမ်းချင်သူများအတွက် အောက်မှာ နည်းလမ်းလေးပါ။ pango-graphite နဲ့ ttf-sil-padauk အတွက်လဲ လိုပါတယ်။
pango source ကို download အရင်လုပ်ပါ။
ပြီးရင်အောက်က command က tar-ball ကိုဖြည်ပေးပြီး diff ပါ apply လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
dpkg-source -x pango1.0_1.26.0-1.dsc
pango1.0-1.26.0 ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့ရပါမယ်။ patch ဖိုင် download လုပ်ပြီး အောက်ကအတိုင်း patch လုပ်ပြီးရင် binary package build လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
patch -p1 < lookup-flag.patch
build လုပ်ပြီးရင် ရလာတဲ့ libpango1.0-0_1.26.0-1_i386.deb ကို install လုပ်ရုံပါပဲ။ (build လုပ်ဖို့အတွက် pango build dependencies တော့ရှိရပါမယ်၊ ဟောဒီမှာ ပဲကြည့်လိုက်ပါတော့)
dpkg -i libpango1.0-0_1.26.0-1_i386.deb
mymr-pangomod ပဲဖြစ်ဖြစ် pango-graphite ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန် install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဟူး ခုမှပဲ ibus-waitzar စမ်းတဲ့ဆီ ရောက်တော့တယ်။ Installation ကတော့ iwaitzar_install_guide.pdf အတိုင်းပါပဲ။ အခု post ရေးနေတာ ibus-waitzar နဲ့ပါ။ စမ်းကြည့်သလောက်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုပဲ candidate window မှာ candidate တွေ render လုပ်တာ pango မသုံးသလိုပဲ၊ ဒီဟာက ibus ကိုက pango မသုံးလို့နဲ့တူပါတယ်။
Posted by တင်မျိုးထက် at 1:18 AM3comments:
Labels: pango, ubuntu, waitzar